Indawo yokuhlala yaseCasa Verde - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseCasa Verde
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uJanet iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwabo kuni bajonge iholide ngokungathi bakwikhaya labo, senze le villa yeholide izimele. ICasa Verde inikezela ngokuzimela ukuba ihotele enabantu abaninzi ayinakukunika. ICasa Verde yabelana ngegadi kunye nenye ivillage. Kubathengi bobuhle bendalo, sinikezele ngombono omangalisayo ojongene nehlathi. Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba, njengebhonasi, amahlathi e-oki amakhulu aseStrandzha aqala nje iimitha ezingama-20 ukusuka kwifestile enkulu yendlu.
Indlu ikhutshwe ngokupheleleyo. Umthamo wayo ngabantu aba-4. Kukho amagumbi - igumbi lokuhlala elinesofa kunye nebhedi kunye nekhitshi esebenzayo enomatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokulala elahlukileyo, i-intanethi engenazingcingo, i-air conditioner, i-satellite TV kunye ne-terrace. Ibhedi yomntwana ibekwe kwigumbi lokulala.
ISinemorets yilali ekuMazantsi-eMpuma Bulgaria. Ime kumasipala waseTsarevo, uthuli lwaseBourgas, kufutshane nomlambo womlambo iVeleka. Akukho thuba ungamelana nokuthandana nale ndawo-indalo eyodwa edibanisa ulwandle, umlambo kunye nentaba yaseStrandzha. Ukutshona kwelanga okuhle phezu kolwandle lwaseMntla, iindawo eziphangaleleyo ezingaphuhliswanga ngaselunxwemeni zikunika imvakalelo yenkululeko kunye nokusondelana nolwandle. Ubuninzi beelwandle buphantse baphuma ngqo kwiscript somboniso bhanya-bhanya - sibukeka, singenamntu kwaye sithandana.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sinemorets